अमेरिकामा कुकुरले ग-यो स्नातक ! – Globalpatrika
घरपालुवा जनावरको शैक्षिक योग्यता ! सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ । अमेरिकाको न्यूर्योकमा ग्रिफेन नाम गरेको कुकुरलाई एक विश्वविद्यालयले डिप्लोमाको उपाधि दिएको छ ।
न्यूयोर्कको क्लार्कसन युनिभर्सिटीमा पढ्ने शारीरिक रुपमा अशक्त २५ वर्षीया युवती ब्रिटनी होलेको ग्रिफेन नाम गरेको कुकुरलाई विश्वविद्ययालयको डिप्लोमाद्वारा पुरस्कृत गरेको हो । केही समय पहिले युवती ब्रिटनी होलेले क्लार्कसन युनिवर्सिटीबाट अक्युपेशनल थेरापीमा मास्टर डिग्री गरेकी थिइन् ।
यसको साथसाथै उनको ४ वर्षको सर्भिस डग ग्रिफिनललाई पनि डिप्लोमाको उपाधि दिइएको हो । ह्वीलचेयरमा आफ्नो जीवन बिताइरहेकी ब्रिटनीले ग्रिफेनलाई पहिलो दिनबाटै ग्रयाजुयट हुनको लागि प्रोत्साहित गर्दै आएकी थिइन् । ग्रिफेनले सधैँ त्यही गथ्र्यो जे ब्रिटनीले गर्थिन ।
ग्रिफेन शारीरिक काम जस्तै ढोका खोल्ने, लाइट जलाउने र इसाराकै भरमा कुनै पनि चिज उनी भएसम्म पु¥याउनेमा पोख्त छ । यसको साथै ग्रिफेनको सहयोगले ब्रिटेनीलाई डिप्रेशन, थकाइ उत्पन्न गराउने किसिमका डरबाट मुक्ति मिलेको छ ।
ब्रिटनी र ग्रिफेनले उत्तरी क्यारोलाइको फोर्ट ब्रेगमा इन्टर्नशिप पनि गरिसकेका छन् । उनीहरुले गतिशीलताको कमीका साथसाथै मनो–सामाजिक विकारसँगै सैनिकहरुलाई सहायता पनि गरेका छन् ।